ဇန်နဝါရီ အပြောင်းအရွေ့မှာ အန်တိုနီယိုကွန်တီ ပထမဦးဆုံး ခေါ်ယူအားဖြည့် သွားရမယ့် ကစားသမားကို ပြောပြလိုက်တဲ့ ဟယ်ရီရက်နက် - xyznews.co
ဇန်နဝါရီ အပြောင်းအရွေ့မှာ အန်တိုနီယိုကွန်တီ ပထမဦးဆုံး ခေါ်ယူအားဖြည့် သွားရမယ့် ကစားသမားကို ပြောပြလိုက်တဲ့ ဟယ်ရီရက်နက်
တော့တင်ဟမ် နည်းပြဟောင်း ဖြစ်သူ ဟယ်ရီရက်နက်က အန်တိုနီယိုကွန်တီ အနေနဲ့ သူ့အသင်းသစ်ရဲ့ ခံစစ်ပိုင်း ပြသနာကို ဖြေရှင်းသွားဖို့ အတွက် လာမည့် ဇန်နဝါရီ အပြောင်းအရွေ့မှာ ဝါရင့် အီတလီ နောက်ခံလူကို ပထမဦးဆုံး ခေါ်ယူအားဖြည့်ရန် တိုက်တွန်း သွားခဲ့ပါတယ်။ နူနိုဆန်တိုရဲ့ နေရာကို အစား၀င်လာခဲ့တဲ့ ကွန်တီဟာ သူကိုင်တွယ်တဲ့ ပထမဦးဆုံး ပွဲစဉ်မှာတင် စပါးရဲ့ ခံစစ်ပိုင်း ရုန်းကန်နေရမှုကို မြင်တွေ့ခဲ့ရပြီး ဗီတက်စီကို ၃-၂ နဲ့ အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ ပွဲစဉ်မှာ တော့တင်ဟမ်ဟာ လွယ်လွယ်ကူကူ နဲ့ ၂ ဂိုး ပေးခဲ့ရပါတယ်။
စပါးဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ တနင်္ဂနွေနေ့က အဲဗာတန်နဲ့ ၀-၀ ပွဲစဉ်မှာ clean sheet ရခဲ့ပေမယ့်လည်း ရက်နက် ကတော့ လာမည့် နွေရာသီမှာ ဂျူဗင်တပ်နဲ့ စာချုပ်သက်တမ်း ကုန်ဆုံးတော့မယ် အသက် ၃၇ နှစ်အရွယ် အီတလီ နောက်ခံလူ ချီလီနီဟာ စပါးရဲ့ ခံစစ်ကြောင်းကို ဦးဆောင်ရန် အပြီးပြည့်စုံဆုံး ကစားသမား ဖြစ်တယ်လို့ ယုံကြည် နေပါတယ်။
ရက်နက်က “အကယ်၍ ကျွန်တော်သာ ကွန်တီ ဆိုရင် ပထမဦးဆုံး ကျွန်တော် လုပ်သွားမယ့် အရာကတော့ မြောက်လန်ဒန်ကို နောက်ထပ် အီတလီသား တစ်ဦး တက်နိုင်သမျှ အမြန်ဆုံး ခေါ်ယူပေးရန် ဥက္ကဋ္ဌ ဒန်နီရယ်လီဗီကို ပြောသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဇန်နဝါရီ အပြောင်းအရွေ့ စျေးကွက် ဖွင့်လှစ်ချိန်မှာ ကစားသမား အားဖြည့်မှုတွေ လုပ်ဆောင်သွားဖို့ အတွက် ကွန်တီဟာ လာမည့် ရက်သတ္တပတ် အနည်းငယ် အတွင်းမှာ သူ အလိုရှိတဲ့ နာမည်ကြီး ပစ်မှတ်စာရင်းကို ရေးဆွဲသွားမယ် ဆိုတာ သံသယ ဖြစ်စရာ မရှိပါဘူး။
ဒီစာရင်းထဲမှာ အသက် ၃၇ နှစ်အရွယ် ဂျော်ဂျီယိုချီလီနီ ပါ၀င်နိုင်ပမလား ဆိုတာ ကျွန်တော် မသိပေမယ့် သူဟာ စပါး မန်နေဂျာသစ် အတွက် လန်ဒန်ကို သူနဲ့ အတူ ပူးပေါင်းရန် အပြင်းအထန် ခေါ်ယူဖို့ ကြိုးစားသင့်တဲ့ ကစားသမား ဖြစ်ပါတယ်။ စပါးဟာ များသောအားဖြင့် ကာလရှည် အတွက် ရည်မှန်းကာ ကစားသမား ခေါ်ယူလေ့ ရှိတဲ့ အသင်းဆိုတာ ကျွန်တော် သိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ရဲ့ လက်ရှိ ပြသနာကို အမြန်ဆုံး ဖြေရှင်းသွားဖို့ အတွက် သူ့ထက် ပိုကောင်းတဲ့ ကစားသမား မရှိပါဘူး။
ပြီးခဲ့တဲ့ ကြာသာပတေးနေ့က ဥရောပရဲ့ ထိပ်တန်း အသင်းတစ်ခု မဟုတ်တဲ့ ဗီတက်စီနဲ့ ပွဲမှာတောင် စပါးဟာ ခံစစ်ကြောင်းကို ဦးဆောင်ပေးနိုင်မယ့်သူတစ်ဦး ဘယ်လောင်တောင် လိုအပ်နေသလဲ ဆိုတာ တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော် အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ပြောခဲ့ပြီးသားပါ။ ဒီအသင်းဟာ အရည်အသွေး ရှိတဲ့ ကစားသမားတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေပေမယ့် သူတို့ တကယ် လိုအပ်နေတာက ခေါင်းဆောင်တစ်ဦး ၊ organizer တစ်ဦး ၊ winner တစ်ဦး ဖြစ်ပြီး ချီလီနီဟာ ဒီသတ်မှတ်ချက် အားလုံးနဲ့ ကိုက်ညီနေပါတယ်။
သူ့ရဲ့ အသက်အရွယ်ကို စိုးရိမ်နေကြတာလား? သူဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ယူရိုပြိုင်ပွဲတုန်းက အီတလီ ခံစစ်မှာ ဘာတွေများ အမှားအယွင်း လုပ်ခဲ့တာရှိသလဲ? သူဟာ အကောင်းဆုံး အချိန်တွေ ကုန်ဆုံးသွားခဲ့ပြီ ဖြစ်တဲ့ ကစားသမား မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော် သူ့ကို နှစ်သက်ပါတယ်။ သူဟာ တကယ့်ကို character ကောင်းသူ ဖြစ်ပြီး သူ့ကို ၁ နှစ် or ၂ နှစ် စာချုပ်ချုပ်ပြီး ခေါ်ယူလိုက်မယ် ဆိုရင်တောင် သူဟာ ဒီအသင်းကို များစွာ အပြောင်းအလဲ ဖြစ်စေမယ့်သူပါ။” လို့ ဆိုလိုက်ပါတယ်။
ကွန်တီရဲ့ အသင်းဟာ နိုင်ငံတကာ ပွဲစဉ်တွေ အပြီး လိဒ်ယူနိုက်တက်နဲ့ ယှဉ်ပြိုင်သွားရမှာ ဖြစ်ပြီး အီတလီ နည်းပြဟာ ဇန်နဝါရီ အပြောင်းအရွေ့မှာ သူ့အသင်း လိုအပ်နေတဲ့ နေရာတွေကို အားဖြည့်ဖို့ အတွက် လာမည့်လတွေမှာ သူ့ကစားသမားတွေကို အရင်ဦးဆုံး အနီးကပ် အကဲဖြတ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Previous Article နော်ဝေပြန်သွားတဲ့ ဆိုးရှား ၊ လက်ရွေးစင်မှာ ပါလာတဲ့ စမစ်ရို ၊ ရှီဗာ လိုချင်တဲ့ EPL စတားတို့နဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ
Next Article မက်ဆီထံမှ မက်ဆေ့ခ်ျ ရခဲ့ကြောင်း ဖွင့်ဟရင်း ၊ ဘာဆာ ကြယ်ပွင့် ဟာ ကမ္ဘာ့ အကောင်းဆုံး ကစားသမား တဦး ဖြစ်လာနိုင်ကြောင်း ထုတ်ဖော် ပြောဆိုလိုက်တဲ့ ဇာဗီ